IiNkomfa eziKhokelwe ngaBafundi basePrayimari-Isikolo saMazwe ngaMazwe saseLyon
IiNkomfa eziKhokelwa ngaBafundi basePrayimari
09 / 04 / 20222021–2022 Unyaka Wesikoloby ISL
Sivuyiswe ukuvula iingcango zethu kwaye simeme i-EYU kunye nabazali basePrayimari kwiiNkomfa zethu eziKhokelwe ngaBafundi.
Umfundi ngamnye, ngenkxaso yootitshala bakhe, ukhethiwe imisebenzi ebonise ukufunda kwabo kuluhlu lweenkalo zekharityhulam. Abafundi bathatha indima yokuba ngutitshala baze bacacise imisebenzi kubazali babo baze bagqibezele imisebenzi. Kwakunye nokuba mnandi kakhulu, iinkomfa zikhuthaza i-arhente yabafundi, zixhasa uphuhliso lweProfayili yoMfundi wePYP kwaye zibonise iindlela zokufunda zomntwana ngamnye.
Siyazingca kakhulu “ngootitshala abaqeqeshwayo” bethu!
TK/PreK Ukudlala kwasimahla
IVeki yeNcwadi yowama-2022
Ungaze uphoswe yiposti! Ukubhalisela ukugaywa kweveki yonke yeendaba zethu, nikezela ngedilesi yakho ye-imeyile ngezantsi.
Qinisekisa (Qaphela: sigcina idatha yakho iyimfihlo kwaye sabelane ngayo nabantu besithathu abenza le nkonzo yenzeke. Funda uMgaqo-nkqubo wethu waBucala opheleleyo.)